ဒါရိုက်တာခရစ်စတီးနားခီ ကြိုက်ခဲ့တဲ့ မင်းသားက ဘယ်သူများလဲ ?
ဒါရိုက်တာခရစ်စတီးနားခီ ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာပြည်ကမင်းသားတစ်လက်
11 Mar 2018 . 12:09 PM
ဥပါယ်တံမျဉ် ဇာတ်လမ်းနဲ့ နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခရစ်စတီးနားခီဟာ သူမအနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာ ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက် ရှိခဲ့တယ်ဒီမင်းသားကတော့ မင်းသားကြီးဒွေး(ကိုသားကြီး) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သားညီ ၊ ကျေ်ဟိန်း နှင့် ဒွေး
ဒွေးကွန်လွန်တဲ့ အချိန်က သူမဟာ Flim School တတ်ရောက်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်လို့ အိမ်စာလုပ်နေရင်းတောင် ငိုခဲ့ရတယ်လို့ သူမရဲ့ Facebook မှာရေးသားထားပါတယ်။
ဒါရိုက်တာခရစ်စတီးနားခီ သီလရှင်လူထွက်ခါစ ပုံ
အခုလိုငိုနေခဲ့လို့ “အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့ ခိုခိုတောင်လန့်သွားပြီး ဘာဖြစ်တာလည်းမေးရတဲ့ အထိပေါ့နော်”လို့ သူမရဲ့ Facebookမှာ မင်းသားဒွေးကို ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ အကြောင်းကို အခုလိုရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit- we love forever dway page
ကိုးသားကြီး လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဒွေးကို တော့ မြန်မာ အနုပညာပရိသတ်တွေ အပါအဝင် အနုပညာရှင် တွေ ကပါလေးစားချစ်ခင်ကြတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ဦးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး ။ ကိုသားကြီးလိုတော်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကို ဆုံးရူံးခဲ့ရတာဆိုရင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် က ဖြစ်တဲ့ အတွက် အခုဆိုရင် ၁၁ နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဒွေး ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ကကွယ်လွန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရော မင်းသားဒွေးကို အခုချိန်ထိကြိုက်နှစ်သက်တုန်းပဲလား ဖြေခဲ့ဦးနော်……
Photo Credit- ခရစ်စတီးနားခီ ရဲ့ Facebook နှင့် we love forever dway page
ဒါရိုကျတာခရဈစတီးနားခီ ကွိုကျနှဈသကျခဲ့ရတဲ့ မွနျမာပွညျကမငျးသားတဈလကျ
ဥပါယျတံမဉျြ ဇာတျလမျးနဲ့ နာမညျကွီးဒါရိုကျတာတဈဦးဖွဈခဲ့တဲ့ ခရဈစတီးနားခီဟာ သူမအနနေဲ့မွနျမာပွညျမှာ ကွိုကျနှဈသကျခဲ့ရတဲ့ မငျးသားတဈယောကျ ရှိခဲ့တယျဒီမငျးသားကတော့ မငျးသားကွီးဒှေး(ကိုသားကွီး) ပဲ ဖွဈပါတယျ။
သားညီ ၊ ကျြေဟိနျး နှငျ့ ဒှေး
ဒှေးကှနျလှနျတဲ့ အခြိနျက သူမဟာ Flim School တတျရောကျနတေဲ့ အခြိနျဖွဈလို့ အိမျစာလုပျနရေငျးတောငျ ငိုခဲ့ရတယျလို့ သူမရဲ့ Facebook မှာရေးသားထားပါတယျ။
ဒါရိုကျတာခရဈစတီးနားခီ သီလရှငျလူထှကျခါစ ပုံ
အခုလိုငိုနခေဲ့လို့ “အိမျကိုပွနျလာတဲ့ ခိုခိုတောငျလနျ့သှားပွီး ဘာဖွဈတာလညျးမေးရတဲ့ အထိပေါ့နျော”လို့ သူမရဲ့ Facebookမှာ မငျးသားဒှေးကို ကွိုကျနှဈသကျရတဲ့ အကွောငျးကို အခုလိုရေးသားဖျောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ကိုးသားကွီး လို့ ခဈြစနိုးချေါကတြဲ့ သရုပျဆောငျဒှေးကို တော့ မွနျမာ အနုပညာပရိသတျတှေ အပါအဝငျ အနုပညာရှငျ တှေ ကပါလေးစားခဈြခငျကွတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈဦးလို့ပွောမယျဆိုရငျလညျးမမှားပါဘူး ။ ကိုသားကွီးလိုတျောတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျကို ဆုံးရူံးခဲ့ရတာဆိုရငျတော့ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှဈ က ဖွဈတဲ့ အတှကျ အခုဆိုရငျ ၁၁ နှဈပွညျ့တော့မှာဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျဒှေး ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ ၁၁ ရကျနကေ့ကှယျလှနျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှရေော မငျးသားဒှေးကို အခုခြိနျထိကွိုကျနှဈသကျတုနျးပဲလား ဖွခေဲ့ဦးနျော……
Photo Credit- ခရဈစတီးနားခီ ရဲ့ Facebook နှငျ့ we love forever dway page